Webcraping Scraping Yakatsanangurwa NeSalalt Expert
iyo inokwanisa kubvisa zvigadzirwa, data, uye mifananidzo kubva pawebsite. Kunyange zvazvo screen scraping inogona kungopikisa mapikisikisi anowanikwa pachikwereti, web scraping inokambaira yose HTML code pamwe nezvose zvakachengetwa mud database. Icho chinogona kubudisa zita rewebsite kune imwe nzvimbo.
Ichi ndicho chikonzero kushandiswa kwewebhu kushandiswa ikozvino mumabhizimisi edijita anoda kukohwa kwe data. Zvimwe zvepamutemo zvinoshandiswa zve web web scrapers ndezvi:
1 - long term care insurance for seniors. Vanotsvakurudza vanoshandisa iyo kuti vabvise dhiyabhorosi kubva kumagariro evanhu uye maforamu.
2. Makambani anoshandisa mabhoti kuti abudise mitengo kubva kune dzimwe nzvimbo dzekwikwidziro dzekambani yekuenzanisa.
3. Tsvaga injini bots crawl nzvimbo nguva dzose kuitira chinangwa.
Zvishandiso zvewebhu zvakagadzirwa nemapurogiramu mapurogiramu, mapurogiramu, uye mapurogiramu anonyorera kuburikidza nehuwandu hwemashoko uye anodhonza mamwe mashoko. Kunyange zvakadaro, dzakawanda zvipfeko zvakagadzirirwa kuita zvinotevera:
Bvisa data kubva ku APIs
Chengetedza data yakabudiswa
Shandura data yakabviswa
Ziva HTML site svondo
Kubva mabhoti maviri akakodzera uye asina kunaka anoshandisa chinangwa chimwe chete, ivo vanowanzofanana. Heano nzira shomanana dzekusiyanisa imwe kubva kune imwe.
Zvipfeko zvinokodzera zvinogona kuonekwa nesangano ravari. Somuenzaniso, Google bots inoratidza kuti ndevaya veGoogle mumusoro wavo weHTTP. Kune rumwe rutivi, bots inotyisa haigoni kuenzaniswa nesangano ripi neripi.
mabhizimisi anokodzera anofanana ne robot renzvimbo..txt faira uye usapfuurira kumapapiro avabvumirwa kupera. Asi malicious bots inotyora mirayiridzo yeavoti uye nyora kubva paji yewebhu rese.
Vashandi vanofanira kuisa mari yakawanda mumaseva kuitira kuti vakwanise kuparadzira zvakawanda zve data uyewo vanoitora. Ichi ndicho chikonzero vamwe vavo vanowanzoshandisa kushandiswa kwebhokisi. Vanowanzokonzera zvirongwa zvepakati penyika dzakapararira dzine malware akafanana uye dzinozvidzora kubva panzvimbo inonyanya. Iyi ndiyo nzira iyo vanogona kukonzera mari yakawanda yedhadha pamutengo wakaderera.
Muiti wekutsvaira kwakadaro anoshandisa botnet umo mapurogiramu anonyadzisa anoshandiswa kuparadzira mutengo wemakwikwi. Chinangwa chavo chikuru ndechokudzvinyirira vadzikwi vavo kubva padzimba shoma ndiyo inonyanya kukosha inofungidzirwa nevatengi. Zvinosuruvarisa, vanotambudzwa nekutengesa mutengo vacharamba vachisangana nekurasikirwa kwekutengesa, kurasikirwa kwevatengi, uye kurasikirwa kwemari apo avo vanoita zvakaipa vacharamba vachifadzwa nekushandira mamwe mabasa.
Zvakagadziriswa zvinyorwa zvinoparadzirwa zvisiri pamutemo zvezvakabva pane imwe nzvimbo. Vanoshungurudzwa nemhando yemhando idzi kazhinji makambani anotsigira pamakambani emakambani emakambani emabhizimisi avo. Mawebhusayithi anoendesa bhizinesi ravo nehuwandu hwemagetsi anowanzotaridzirwa kune zvinyorwa zvekugadzira. Zvinosuruvarisa, kurwisa uku kunogona kuvhiringidza kwavari.
Zviri kunetseka kuti teknolojia yakagamuchirwa nevanovhiringidza vakaipa yakaita kuti hutete hwakawanda husingabatsiri. Kuti udzikise chiitiko ichi, unofanira kutora kushandiswa kweImpperva Incapsula kuchengetedza website yako. Iko kunovimbisa kuti vose vanoshanyira panzvimbo yako yepaiti vakarurama.
Apa imperva Incapsula inoshanda
Inotanga chirongwa chekuongorora nekuongorora granular ye HTML headers. Izvi zvinosarudza kana mushanyi ari munhu kana bot uye iyo inotarisa kana muenzi wacho akachengeteka kana kuti akaipa.
mukurumbira we IP ingashandiswa zvakare. IP data inosanganiswa kubva kuvanourayiwa. Kushanyira kubva kune chero ipi zvayo yePs ichakuongororwa zvakare.
Maitiro ekuita maitiro ndeimwe nzira yekuziva kuti njodzi bots. Ndivo avo vanobatana nehuwandu hwekuda kwechikumbiro uye kushandiswa kwekunakidza maitiro. Vanowanzotanga kuedza kubata peji rimwe nerimwe rewebsite mune nguva pfupi. Nzira yakadaro inonyunyuta zvikuru.